श्रीमानलाई निद्राको औषधी खानामा खुवाएर प्रेमीसँग गर्थिन यस्तो हर्कत एक दिन भयो सबै हद पार ! -
श्रीमानलाई निद्राको औषधी खानामा खुवाएर प्रेमीसँग गर्थिन यस्तो हर्कत एक दिन भयो सबै हद पार !
November 21, 2020 chothale
काठमाडौ / एक श्रीमतीले आफ्ना प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानकै जीवन लिएकी छिन् । यो घटनाको रहस्य पुलिसले सुल्झाएको छ । घटनामा संलग्न पत्नी सिमर कौरलाई पक्राउ गरिएको छ । उनका प्रेमी अझै पनि फरार रहेको बताइएको छ । आज तकको समाचारमा उल्लेख भएअनुसार घटना पंजाबको तरनतारन जिल्लाको पल्लासोर गाउँको हो ।
अनलाइनमा कल गर्ल खोज्दा एक युवक यसरी लुटिए ! काठमाडौं । एक पुरुष कल गर्लका नाममा नराम्रोसँग लुटिएका छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको नोएडामा अनलाइनमार्फत कल गर्ल प्रदान गर्ने नाममा त्यसरी फसाइएको हो । जानकारी अनुसार त्यहाँका एक ३० वर्षीय व्यक्तिलाई कल गर्लका नाममा १६ हजार रुपैयाँ ठगिएको समाचार बाहिर आएको छ ।